Akụkọ - TIANJIN WODON SỌRỌ NA Mgbakọ Africa
TIANJIN WODON DIKA NA Mgbakọ Africa
Tianjin Wodon, mara dị ka a na-eduga emeputa nke bimetal chromium carbide machie ekpuchi ịgbado ọkụ eyi efere na hardfacing cored ịgbado ọkụ wires, bụ ịga Mining Africa si 10th-14th na Sep.
N'ime afọ ndị gara aga, Tianjin Wodon raara nye n'ahịa anyị eyi efere na ịgbado ọkụ wires n'ụwa nile ma merie aha ọma si ahịa anyị. Ugbu a, anyị nwere ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile. Obi umeala na ezi obi, anyị ga-nọgidere n'ahịa anyị Weld cladding efere na ịgbado ọkụ wires na ẹkedọhọ inye ndị ahịa anyị mma ngwaahịa na ezigbo qualtiy na a nnọọ asọmpi price.
9. injinia ọkụ eletriki - akụrụngwa injinịa eletriki na ọkọnọ.
10. ulo oru, injinia imewe na n'ichepụta
11. ewu nchekwa na akụrụngwa.
12. ụlọ ọrụ ike, ike ume, ndị na-enye ọkụ na okwu metụtara ya.